(SAWIRRO) Guddiga horumarinta degmada Garowe oo qabtay kulan ku saabsan qaabka loosoo xulayo golaha degaanka Garowe. | puntlandi.com
(SAWIRRO) Guddiga horumarinta degmada Garowe oo qabtay kulan ku saabsan qaabka loosoo xulayo golaha degaanka Garowe.
Garowe (Puntlandi) Guddiga horumarinta caasimadda Puntland, ayaa maanta qabtay kulan ku saabsanaa dib u eegista qaabka loosoo xulayo xubnaha golaha degaanka ee degmada Garowe.
” Nabaddoonow waxaa la idinka rabaa inaad noo keentaa wax idin qanciya anagana aan ku qanacno, sababta la idinkugu yeeray oo aad magacaan u huwan tihiin waa inaad bulshada u keentaan cid uqalanto.” ayuu Islaanku kula dardaarmay nabaddoonada kulanka yimid.